Ɔbɛnem - Wikipedia
Ɔbɛnem( pronounciation of "Ɔbenem" (help·info)) yɛ bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ afe no mu.Bosome yi wɔ ɛndafua eduasa-baako. Ɛyɛ bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛwɔ afe nu mu. Ɔbɛnem bosome no hyɛ Ɔgyefuo ne Oforisuo bosome no ntɛm wɔ afe no mu Ɔbɛnem bosome no ho hia wɔ ɔman Gaana mu. Ɛfiris3 Ɔbɛnem bosome no yɛ bosme a Gaanafoɔ de da wɔ ammamerɛ ne ammaneɛ adi. Gaana fahodie da nso wɔ Ɔbɛnem mu.
2 Nna atitirew anaa nnapɔnna wɔ bosome no mu
3 Hwehwɛ pii ka ho
4 Nnwoma ahodoɔ a menyaa mmoa firii mu
Akanfoɔ bosome nu gyina adaduanan so, ɛyɛ nda du-nnan na ɛwɔ bosome bia mu. Tete nu Akanfoɔ bosome nu yɛ nnwɔtwe anaa nkron. Akanfoɔ bosome nu sesei yɛ du-mmienu te sɛ 'Gregorian Calendar' nu. Ɔbɛnem yɛ bosome a tɔso so mmiɛnsa wɔ afe mu. Ɛsan yɛ Ɔpɛ bere bosome wɔ afe mu, na ɛtwa Ɔpɛ bere bosome nu ano.
Wɔ Gaana, Ɔbɛnem yɛ bosome sronko. Esan nkae bi te sɛ; Ɔbenem da ɛtɔ so nsia yɛ Gaana Fahodie da 'Independence Day' wɔ afe apem ahankron ne aduonum-nson (1957) mu. Ɛsan so yɛ bosome a Gaanafoɔ de kyerɛ wɔn ammamere ne ammamerɛ ahorow. Afahyeɛ a Gaanafoɔ bi di wɔ Ɔbɛnem mu ne Gologo afahyeɛ.
Hwehwɛ pii ka ho[sesa]
↑ 1.0 1.1 https://learnakan.com/months-in-twi/
↑ 3.0 3.1 https://www.modernghana.com/news/1064018/media-general-celebrates-march-2021-as-ghana-month.html#:~:text=Ghana%20Month%20is%20a%20month,celebrate%20its%20rich%20cultural%20heritage.
↑ 4.0 4.1 https://www.timeanddate.com/holidays/ghana/
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Ɔbɛnem&oldid=60417"
Fa links ɛka ho
Nsesae ba kratafa yi so da 4 Ogyefuo 2022, mmere 08:39.